छोटकरीमा: आज-२०७७ माघ ०६, मंगलबार
आज 'संसद विघटनसम्बन्धि रिट विचाराधीन,कहिलेसम्म लम्बिएला बहस ?', 'राडी बजारमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा','पार्टी कमिटीहरू तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन', 'अमेरिकी उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसद्वारा सिनेट सदस्यबाट राजीनामा' लगातयत विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा तीन दिनदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ। जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको ‘वा’ काे अर्थ साेधेका छन्।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले खोजे ‘वा’ को अर्थ ...
प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न : संसद् विघटन अस्वीकार गर्दा सरकार धारा ७६ (१) कै हुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
कहिलेसम्म लम्बिएला संसद विघटनको बहस ?
रुकुम पश्चिमको राडीबजारमा आज साँझ ५ बजेदेखि अनश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
आठबीसकोट नगरपालिकाको ९ नम्बर वडा राडीबजारमा केही समूहबाट अनावश्यक भेला हुने अवाञ्छित गतिविधिहरु गरी शान्ति भंग हुनेगरी हुलदंगा वा अशान्ति सिर्जना गर्न खोजिरहेकाले निषेधाज्ञा गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैभन्दा पहिले त्यसलाईं असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर निर्णय गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस थियो। तर, अहिलेसम्म आउँदा कांग्रेसभित्र अस्थिरताकाे स्थिति देखिएकाे छ।
कांग्रेसमा नसुल्झिएको वार्ता, पौडेल भन्छन्–सभापति ओलीकै पक्षमा देखिए
कांग्रेसमा विवाद : प्रदेशमा ओलीको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा ?
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजाहरुको पालामा संसद् विघटन गरे जसरी नै संसद् विघटन गरेको बताएका छन्। संसद् विघटन गरेर देशमा प्रतिगमनको खतरा देखिएको र प्रतिकान्तिको प्रयास भएको बताउँदै दाहालले यसलाई रोक्नका लागि जुनसुकै हदसम्म जानुपर्ने दाहालले बताए।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली कामचलाउ भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य नै प्रधानमन्त्री हुने भन्दै उनले ओलीले कि कामचलाउ भन्नुपर्ने कि कुर्सी छोड्नुपर्ने बताएका हुन्।
ओरिजिनल एमाले केपी होइनन्, मै हुँ, अब एमाले र माओवादी ब्युँतिँदैनन् : माधव नेपाल (भिडियोसहित)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि यसअघि परेका करिब तीन हजार आवेदन खारेज गरी नयाँ प्रस्ताव माग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर बढाउन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो।
राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमका तीन हजार निवेदन खारेज गरी नयाँ माग
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीका सबै जिल्ला, जनसंगठन र तहका कमिटीहरू तत्काल पुनर्गठन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
पार्टी कमिटीहरू तत्काल पुनर्गठन गर्न ओलीको निर्देशन
पुनर्निर्माणपछि चिटिक्क परेको रानीपोखरी लेउ र झ्याउले कुरूप बन्न थालेपछि काठमाडाैं महानगरपालिकाले सरसफाइ गर्न थालेको छ। पोखरीमा लेउ जम्मा हुने कारण पत्ता लगाएर माछा राख्ने वा लेउ नियन्त्रण गर्ने विषादी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे समेत छलफल भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
कम उमेरमा हुने विवाह मोरङमा स्थानीय तहका न्यायिक समिति र अधिकारकर्मीका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। उमेर नपुगी विवाह गर्ने, छोराछोरी जन्माउने र सम्बन्ध–विच्छेदको अवस्थामा पुग्ने गरेका धेरै घटना आउन थालेपछि न्यायिक समितिलाई न्याय दिन मुस्किल परेको हो।
कम उमेरको विवाह स्थानीय न्यायिक समितिमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले केश मुण्डन गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको ज्ञानेश्वरबाट सुरु भएको उनीहरूको विरोध र्‍याली कमल पोखरीमा पुगेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हाे।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध केश मुण्डन गरी प्रदर्शन [तस्बिरहरु]
हुम्लामा प्रचण्ड-नेपाल र ओली समूहबीच झडप
कमलपोखरीलाई सुन्दर बनाउने नाममा काठमाडौं महानगरपालिले कंक्रिटको जथाभावी प्रयोग गरेको भन्दै सम्पदा र पर्यावरणप्रति सचेत समूहले मंगलबार काठमाडाैँ महानगरपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्।
'सिमेन्ट र डण्डीको कमल हामीलाई चाहिँदैन'
पत्रकार नारायण वाग्लेले प्रतिनिधिसभाविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री फेर्ने साधन बनाए जनता सडकमा नआउने बताएका छन्। हिजोको जनआन्दोलनमा गरिएका वाचाहरुमा कहाँकहाँमा नेतृत्व कहाँकहाँ चुक्यो भन्ने कुरा उल्लेख गरी आन्दोलनरत पार्टीहरुले बडापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो।
समावेशी राज्य व्यवस्थाका लागि संघीयताको मुद्दा उठाएर १४ वर्षअघि मधेस आन्दोलन चर्कियो । भर्खरै सकिएको जनआन्दोलनको जगमा अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था अपूरो रहेको र त्यसले मधेसीलाई उपेक्षा गरेको ठम्याउँदै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले तराई–मधेसलाई फेरि तरंगित बनायो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्कियो।
मधेस आन्दोलनको १४ वर्ष : मुद्दा र उद्देश्यहरू अझै ‘वनवासमै’
अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिएकी छिन्। उपराष्ट्रपतिको रूपमा शपथग्रहण गर्नु दुई दिनअघि उनले सोमबार सिनेटर पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्।
उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिसद्वारा सिनेट सदस्यबाट राजीनामा
दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनामा सोमबार ६.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्प स्थानीय समयअनुसार राति ११ बजेर ४५ मिनेटमा गएको थियो। यो भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब २० किलोमिटर गहिराइमा गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेले जनाएको छ।
भारतको गुजरात राज्यअन्तर्गत पर्ने सुरतको कासाम्बा क्षेत्रमा भएको ट्रक दुर्घटनामा परी कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ। सुरतको कोसम्बामा सोमबार राति एउटा ट्रकले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएका १५ जनामध्ये सातजना महिला, सातजना पुरुष र एकजना एक वर्षीय शिशु रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
भारतको सुरतमा भएको ट्रक दुर्घटनामा १५ जनाको मृत्यु
विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) का महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले असमान नीतिका कारण कोरोना खोप वितरण प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। असमान नीतिका कारण विश्वले ‘विपत्तिपूर्ण नैतिक विफलता’ को सामना गर्नुपर्नेे औंल्याएका हुन्।